Makambani epamusoro anoshandisa kudzidza kwemuchina nenzira inotonhorera - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bhizinesi Njere, Machine Learning
Mumazuva ano makwikwi emamiriro epasi rose ari kumhanya nenzira dzakasiyana siyana kuti aburitse tarisiro, yekugadzirisa iri dambudziko makambani ari kumhanyira kwariri michina yekufunda tekinoroji iyo inokwanisa kukwira zvakadzama mune yevatengi data uye kuburitsa nzwisiso nezve akasiyana mafambiro uye zvido izvo zvinobvumidza kufanofungidzira mune ramangwana uye matsva emakona ekudyidzana pakati pemativi maviri vatengi nevatengesi. Machine pakudzidza inoita kuti makambani agadzirise zvavanosangana nazvo mumatanho akasiyana siyana izvo zvaisaita nemaoko. Ngationei kuti makambani ari kuongorora sei zvakasiyana-siyana zve machine learning nekuda kwekuve mumakwikwi kana panzvimbo yepamusoro, mamwe emakambani aya atove masters uye zororo riri kushanduka kuti rive mumisika mikuru, asi pakupedzisira basa iri rose pamwe chete rinoratidza ruzivo rwevashandisi uye bhizinesi rine chekuita nazvo.
Mumwe ari mushandisi wePinterest anonyatsoziva kuti Pinterest yakwezva nhamba huru yevanhu vanosevha kune zvavanoda; ine simba guru pamusoro pe internet uye evanhu vezvenhau system. Muna 2015 Pinterest akawana Kosei, a machine learning otomatiki sisitimu yekushambadzira application inobvumira chaiyo yemukati kutsvaga uye kurudziro. Izvi zvinobata mashandiro ebhizinesi uye spam moderation yePinterest, izvi zvakare zvinobvumira kuwedzera kune vashandisi senge email kunyorera tsamba yetsamba, kuita mari yekushambadzira. Izvi zvinosimbisa ecosystem yekufarira iyo yakavakirwa pakugadzirisa zviripo online zvemukati uye kugadzirisa kushambadzira kunoshanda mune yekutanga kukosha.
Nhanganyaya ye chatbot by facebook messenger akabvisa musiyano uripo pakati pekutaura chaiko uye kwevanhu. Iyi ficha nyowani inobvumidza chero mugadziri kuti agadzire pamwe nekutumira izvo kwete, izvo zvinongobatanidzwa facebook messenger. Izvi zvinoita kuti kuchengetedza masevhisi evatengi kutarise zvakanyanya uye kuve nyore kune vazhinji vanotanga vane mashoma einjiniya rutsigiro. Facebook yakaunza zvimwe machine learning maapplication zvakare senge komputa yekuona algorithms iyo inoverenga mufananidzo uye inosimudzira yekuona chiitiko nekusimudzira iyo yakashata yemhando yemukati. Facebook yakaunzawo sarudzo yekuverenga yevasingaonekwi uko tsananguro yemufananidzo inogona kuverengerwa kunze. Kuwedzerwa kutsva uku kwakapa humwe huyedzo hwekuedza hwakasiyana kune mukurusa wesocial platform.
Pamazuva ese, tinosangana nekukakavadzana kwakawanda uye mazhinji acho akagadzirwa pamusoro pe twitter, nei Twitter iri kubata maziso akawanda kudaro? Pindura kune izvi kusvitsa kwetitter kumamirioni avanhu mune imwe chete yekumaka sisitimu ine @ kungave mumhinduro kana chikamu chekutaura. Imwezve chikamu che machine learning Shanduko inofambiswa netekinoroji ndeyekuwedzerwa kwealgorithmically curates twitter timelines iyo inoongorora yega yega yega yega tweet munguva chaiyo uye inotora iwo zvinoenderana nemukati mira uye inoagadzira nenzira inofambiswa nenguva. Izvi zvinobvumira kubatanidzwa kwakanyanya pane akaratidzwa matweets akaitwa ne machine learning maapplication tekinoroji iyo inodzidza izvo zvemunhu zvaanoda uye yapfuura data uye inoburitsa algorithmically inotungamirwa mafeed ayo anoshandura zvachose iyo social media chikuva.
Google iri kuwedzera dhatabhesi yayo pahwaro hwekutsvagisa uye budiriro inoratidza iyo machine learning vavariro yeGoogle. Wakambonzwa nezvekwakadzika pfungwa network ichangobva kuvhurwa neGoogle inova iyo ichangoburwa yekuvandudza neural network tsvagiridzo yeGoogle? Izvi zvinobvumira iyo chaiyo twist mune classical analog ye machine learning, izvi zvinosanganisirawo kugadzirisa mutauro mutauro, kuziva mutauro, uye dudziro inoenderera ichidudzira mukutsvaga kwekutsvaga uye kufanotaura mune ramangwana.
5. eCommerce makambani
Kwakave nemazuva apo vatengesi vanofanirwa kuenderera mberi vachishanda pachiteshi chinobatanidza pakati pezvitoro nevatengi, online online shopping system yachinja zvese, kuunzwa kwemakambani senge edge kesi yakambozivikanwa sekuenzanisa metric yakashanduka machine learning tekinoroji yekubatsira e-commerce webhusaiti vatengesi kuvandudza ruzivo rwevatengi. Kuwedzera kweyero yekutendeuka kumucheto kesi inorerutsa ruzivo rwemutengi nekuongorora maitiro emutengi uye maitiro avo paunenge uchitsvaga zvemukati zvemukati.
Mazda inoshandisa dhijitari yemunhu mubatsiri application ye machine learning kutsvaga vanofurira kusimudzira zvigadzirwa zvavo online kunyanya mota. Ivo vanoshandisa iyo ML Apps inobvumira kutarisisa positi uye wongororo online mukati mese evanhu vezvenhau papuratifomu uye nekuwana iyo chaiyo inotarirwa zviratidzi kuburikidza neakasiyana matauriro uye emojis. Nekudaro, vanhu vakawana chigadzirwa vanogona kutumira ruzivo rwavo pa twitter uye facebook. Iyi data eccentric maitiro inokanganisa kufunga kwevatengi pachavo.
Wakambonzwa nezveChinese yekutsvaga injini yeBaidu iyo yakawedzera mushandisi wayo dhatabhesi pasi rese nekuda kwe machine learning, Baidu ari kuisa mari yakawanda mukati chakagadzirwa njere nguva pfupi yapfuura? Uchishandisa zvakadzama maitiro enzwi, otomatiki neural network system iyo inogadzira izwi rekunyepedzera revanhu, iri chaiyo zvekuti zvakaoma kusiyanisa pakati pezviviri. Iyi netiweki sisitimu inogona kunzwisisa uye kudzidza yakasarudzika yakasarudzika manhamba emunhu uye madudziro. Izvi zvinogona kutogadzira kutandara kwakaringana kwemukurukuri mutevedzeri uye ruzivo.
Ikozvino kuwedzerwa kukambani yakadzika izwi system 2 iyo inobvumidza inogara-kwenguva mhedzisiro mukugadziriswa kwemitauro uye kutsvaga kwezwi uye maitiro ekuzivikanwa kwenzwi. Iyi sisitimu inogona kushandiswa kuongorora mamwe manzwi-based zvinoshandiswa mune yekuchengetedza system zvakare.
Kuve imwe yemakambani makuru uye ekare ehunyanzvi IBM yakagadzirisa shanduko yemabhizimusi ekare emabhizimusi mumusika webhizimusi nemusika wemari. Mukurumbira chakagadzirwa njere maitiro e IBM Watson inobvumira kuzvidzidzira maitiro emuenzaniso zvidzidzo. Iyi nzira nyowani yakaiswa pamberi mumasangano mazhinji senge zvipatara nenzvimbo dzekurapa uko inopa mazano ekurapa epamusoro kune vanachiremba.
Watson iri kushandiswa muzvikamu zvekutengesa zvakare kwayinoshandiswa kubatsira vatengi mukupa sarudzo uye kurudziro kuburikidza neWatson ML technology application.
Unofanira Kuverenga: Machine Kudzidza vs Kufanotaura Ongororo
Kuunzwa kwehungwaru mutengi manejimendi manejimendi manejimendi system neimwe ye shark ye tech world system yekutengesa simba inofanana nesosi uye chinangwa. Salesforce inoshandisa Einstein bhizinesi module ye machine learning iyo inovhara nhanho dzekutanga dzehukama hwevatengi pamigumo yese. Izvi zvinovatendera kutora iwo akakosha maprofiles emutengi achibvumira yakazara zvibodzwa, inotungamira yekuona uye inoshanda yevatengi sevhisi.
Yelp iri kusimudzira mutengi masevhisi evatengi uye zviitiko nekurega vashandisi vachitumira ongororo pamwe nemifananidzo yakanamatira kwavari. Kushandisa tekinoroji yekutsikisa mifananidzo nekambani kwakabvumidza makambani kuumbiridza, maneja, kunyorera uye kuisa muzvikamu mifananidzo izvo zvinoratidza data revanoongorora uye ongororo yavo.
Nekufambira mberi nekukurumidza kwetekinoroji zvipo hazvisi nyore chete asi huwandu hwakawanda hwekuenderera mberi kwekutsvaga uye kusimudzira kwevaongorori. Izvi zvinoshandura mamiriro ese ekuti marimendi ekuvandudza ari kuchinja sei algorithms, zvemukati zvekuvaka nekutarisa kwevanhu.
Unoda rubatsiro neML yako Mapurogiramu? Taura nekutaurirana